» यो हप्ता कसले मार्ला बाजी ?
यो हप्ता कसले मार्ला बाजी ?
२७ मंसिर २०७७, शनिबार २०:०२
मकवानपुर, २७ मंसिर । विश्वप्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ मा शनिबार उत्कृष्ट ३ जोडीहरुको छनौट हुँदैछ । उनीहरुले यस साता फाईनलमा पुग्नका लागि कडा प्रतिस्पर्धा समेत गरेका छन् । शुक्रबारको प्रस्तुतिमा ४ सेमिफाईनालिष्ट जोडीहरुमध्ये ३ जोडीहरुले ३० मा ३० अंक र एक जोडीले २९ अंक प्राप्त गरेका थिए । बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको बुद्धिका जोडी बाहेक अन्य ३ जोडीहरुले ३० मा ३० नै अंक प्राप्त गरेका हुन् । तसर्थ शुक्रबारको निर्णायकहरुको अंकका आधारमा यो साता बुद्धिका जोडीलाई खतरा छ तर शनिबारको प्रस्तुतिको अंक र दर्शक भोटका आधारमा फाईनल जोडी तय हुने भएकोले यो जोडी खतरामा नपरी सुरक्षित हुनसक्ने अवस्था पनि रहेको छ । शुक्रबारसम्म प्राप्त भएको हालसम्मको अंकका आधारमा सुबिजु जोडी ४१६ अंकका साथमा पहिलो नम्बरमा छ भने प्रियम जोडी २७८ अंकका साथमा अन्तिममा छ । तर उनीहरु वाईल्ड कार्ड राउण्डपछि मात्र शोमा प्रवेश गरेकाले उनीहरुको हालसम्मको अंक कम भएको हो । त्यस्तै आमोद जोडीले ४०० अंक र बुद्धिका जोडीले ४०९ अंक प्राप्त गरेका छन् । अवार्डका आधारमा सबैभन्दा बढी अवार्ड बुद्धिका जोडी र सुबिजु जोडीको नाममा छ । उनीहरु दुबैले समान २–२ वटा अवार्ड जितेका छन् । आमोद जोडीले एउटा अवार्ड जितेको छ भने प्रियम जोडीले एउटा पनि अवार्ड जितेको छैन । बटम लाईनमा परेका हिसाबले एकपटक मात्र बटम लाईनको सामना गरेर प्रियम जोडी अगाडि छ भने ४ पटक बटम लाईनको सामना गरेर बुद्धिका जोडी खतरामा छ । सुबिजु जोडीले २ पटक र आमोद जोडीले ३ पटक बटम लाईनको सामना गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा शनिबार कुन जोडीले बाजी मार्लान् भनेर सजिलै भन्नसक्ने अवस्था छैन । तपाईको विचारमा कुन जोडीले यो हप्ता बाजी मार्लान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो–
डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पहिलो वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री जोडी हुन् कलाकार प्रियना आचार्य र कोरियोग्राफर शुभम भुजेलको जोडी । स्टेजमा प्रियम जोडीका नामले परिचित यो जोडीले शोको पाँचौँ हप्तामा वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री पाएका थिए । शुभम र प्रियनाले शुक्रबार पहिलो पटक ३० मा ३० नै अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले शुक्रबार ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । फुलन्देकी आमाका नामले चर्चामा आएका हाँस्य कलाकार उमेश राई र कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीको जोडीले पनि यतिखेर स्टेजमा चर्चा कमाईरहेका छन् । स्टेजमा आमोद जोडीका नामले परिचित यो जोडीले शुक्रबार ३० अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले शुक्रबार साकेला नृत्य गरेका थिए । यो जोडीले तेस्रो हप्ता पर्फाेमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए ।
त्यस्तै नायिका सुमी मोक्तान र कोरियोग्राफर बिजु पार्कीको जोडी अहिले दर्शकको रोजाईमा छन् । उनीहरु शोमा स्टन्टवाला जोडीका रुपमा देखिएका छन् । उनीहरुले शुक्रबार ३० अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले शुक्रबार आफ्रो फ्युजन डान्स गरेका थिए । उनीहरुले दोस्रो हप्ता पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड र बाह्रौँ हप्तामा पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । प्रतियोगितामा भाग लिएका सबै स्टार र कोरियोग्राफरहरुको जोडीहरुमध्ये सर्वाधिक केमेष्ट्रि मिलेको जोडीका रुपमा बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको जोडी चर्चामा छ । स्टेजमा बुद्धिका जोडीका नामले परिचित यो जोडीले शुक्रबार २९ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले शुक्रबार ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । उनीहरुले नवौँ हप्ताको पहिलो दिन र एघारौँ हप्ताको पहिलो दिन गरी जम्मा २ पटक पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका छन् ।